Inkulumo Echaza Isimo Sezwe imvelo iye sashintsha ngokuphawulekayo kusukela ekupheleni XIX leminyaka, isintu esibhekana naso imvelo njalo isivivinyo. Befuna induduzo abantu enkulu wangcwatshwa ngaphansi ubumsulwa acwebile Zomhlaba izinkampani udaka ubuchwepheshe. Nokho, hhayi kuphela umuntu - isephulamthetho izifo kwamaplanethi. Ngezikhathi ezithile abantu baphumule amakhefu umsebenzi okungesona esingokwemvelo ilanga. Ikakhulukazi uzizwe ngokucacile izinguquko kubantu abaphethwe izifo zenhliziyo nemithambo yegazi. Ngalesi sikhathi, izimo bayanda ukumelwa inhliziyo nokushaywa unhlangothi.
Ososayensi bengayeki ukufunda ilanga, umsebenzi ngaphezulu kwaba nabantu bezizwe ezixubile izinkanyezi bebonke. Kule nqubo, izazi wafinyelela esiphethweni ukuthi ukuwa kuyoba ngokungavamile ongaphakeme kule iminyaka eyishumi nanye esilandelayo, umsebenzi solar. Nokho, abanye ososayensi bakholelwa ukuthi lo mjikelezo ukuqhuma entsha surface yenkanyezi hhayi ungaqala. Lo mbono waba lizwakalise emhlanganweni abasebenzi emnyangweni ekutadisheni Sun futhi umsebenzi wayo we-American Astronomical Society.
Ochwepheshe wafinyelela esiphethweni sokuthi zonke iminyaka eyishumi nanye izinkanyiso izinguquko kwabantu ohlangothini ezincane. Izazi zokuhlolwa kwezinkanyezi zakwazi ukwenza umfuziselo ilanga ngafunda ukubikezela ukuziphatha umsebenzi wayo.
American Institute of ochwepheshe ukutadisha ezinyakazayo plasma ngaphakathi isilomo se-rock. Ukuhambisa plasma esukela empumalanga kuya entshonalanga, luhambisana nomthwalo ukuhlanekezela kazibuthe amakhulu, ukuze izindawo ukukhanya kobuso akhiwa, okuyinto kuyabonakala emhlabeni. Ososayensi awuboni Nokho, noma yiluphi ushintsho indlela yokwakheka plasma, ukuqhuma omusha ngamunye on the Sun yakha kubo. Kukholakala ukuthi umsebenzi alandelayo izinkanyiso kuyoba buthaka kakhulu futhi ngeke aboniswe, njengoba kule minyaka edlule.
Lapho umsebenzi solar namanje ukwandisa ke kuphela eminyakeni 2021 kuya 2022. Kuyinto kakhulu kamuva kunokulindelekile. Nokho, ezinye izazi ukutadisha ebusweni inkanyezi, wafinyelela esiphethweni ukuthi eminyakeni eyishumi nantathu of eyalandela umfutho ukuqhuma emhlabeni kwehle. Lo phendla ekutadisheni Dynamics ukuthuthukiswa kanye ukubukeka izindawo surface kwelanga.
Inombolo ephelele imijikelezo elilingana 24 m, lapho isikali umfutho kwehle ukuqhuma phakathi nowe 23th futhi 24 kuphela. Ngakho-ke, kukhona umbono ukuthi ababuthakathaka umsebenzi solar kungenzeka yokuthi umjikelezo 25th kungenzeki.
Sun Isifundo olwenziwa amaqembu amaningana abacwaningi. Ezinye zazo yilezi linombono wokuthi umjikelezo 25th asikafiki, kodwa ngemuva kokulibaziseka eside. Ukuhlaziya engxenyeni engaphandle ye-iplanethi, abacwaningi baye bakhiqiza izilinganiso we kazibuthe lale nkanyezi. Ngokusho kwabo, kwafika isikhukhula esisabekayo entsha emsebenzini solar kufanele senziwe ubuso bayo e parallel 70 th. Kulindeleke ukuthi izoya ngase yenkabazwe. Ngakho, amandla kazibuthe lomjikelezo iyokuba shift by 85 degrees.
Akuwona wonke ama-astronomer uyavumelana nalesi sitatimende, njengoba ukunikeza Ukubikezela enembile yendlela umsebenzi iyobonakaliswa phezu kobuso Sun, manje ayinakwenzeka. Imodeli yesimanje yokuhlaziya ayivumeli izibalo elungile, ngoba wamanje, 24 th umjikelezo kulindeleke ngaphambili, kodwa isibikezelo ongafikanga ososayensi kweqiniso. Weza hhayi kuphela ngemva, kodwa wazibonakalisa futhi buthaka kakhulu.
Pisces Mystical: kwedivayisi nezinye izimpawu
Izifundo ukubhula ngezinkanyezi: isici besilisa Taurus
Umdlavuza Fish: kwedivayisi othandweni ngobuhlobo nabanye abantu nangomshado. Pisces Nomdlavuza: izimpawu ukuhambisana
Aquarius futhi Virgo. umlingani kwedivayisi
Ukuhambelana Cancer futhi Sagittarius
Izifundo astromineralogii: ukuthi kusho elinqabileyo uphawu zezinkanyezi
Amanzi Deionized: ukukhiqizwa, ukusetshenziswa kanye izibikezelo
Kungani dream of a ihlengethwa? Nokho, yebo, inhlanhla!
Uyini follicle evelele?
Le penicillin elwa namagciwane, yokusetshenziswa, izindlela zokwelashwa
I ileitis esibulalayo (isifo Crohn): izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
"Bol-Run" (amaphilisi): imiyalelo yokusetshenziswa nokubuyekezwa
Loluguduzisa adaptha Microsoft Teredo: ukuthi kuyini, futhi kubalulekile ukuba chgo?
Ukulungiselela imbewu ikhukhamba yokutshala emhlabathini, phezu izithombo kule abamba ukushisa
Inhlonipho yase-Iberia. Umlando weSpain
GTSSS - abasebenzi impendulo. FSUE GTSSS: Izibuyekezo
Le filimu "Uma, engamashumi amabili kamuva": nabalingisi izindima